Ọrụ Ndịozi 8 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Myanmar Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Jenesis Ọpụpụ Levitikọs Ọnụ Ọgụgụ Diuterọnọmi Jọshụa Ndị Ikpe Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ndị Eze 2 Ndị Eze 1 Ihe E Mere 2 Ihe E Mere Ezra Nehemaya Esta Job Abụ Ọma Ilu Ekliziastis Abụ Sọlọmọn Aịzaya Jeremaya Abụ Ákwá Ezikiel Daniel Hosia Joel Emọs Obedaya Jona Maịka Nehọm Habakọk Zefanaya Hagaị Zekaraya Malakaị Matiu Mak Luk Jọn Ọrụ Ndịozi Ndị Rom 1 Ndị Kọrịnt 2 Ndị Kọrịnt Ndị Galeshia Ndị Efesọs Ndị Filipaị Ndị Kọlọsị 1 Ndị Tesalonaịka 2 NdịTesalonaịka 1 Timoti 2 Timoti Taịtọs Faịlimọn Ndị Hibru Jems 1 Pita 2 Pita 1 Jọn 2 Jọn 3 Jọn Jud Mkpughe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Ọrụ Ndịozi 8:1-40
8 Ma Sọl kwadoro ogbugbu e gburu ya.+ N’ụbọchị ahụ, a malitere ịkpagbu+ ọgbakọ ahụ dị na Jeruselem; a chụsasịrị+ mmadụ niile n’ógbè ndị dị gburugburu Judia na Sameria, ma e wezụga ndịozi. 2 Ma ndị ikom na-asọpụrụ Chineke buuru Stivin gaa lie,+ ha kwakwaara ya ákwá arịrị dị ukwuu.+ 3 Otú ọ dị, Sọl malitere imeso ọgbakọ ahụ n’ụzọ jọgburu onwe ya. Ọ na-awakwasị ụlọ niile n’otu n’otu, na-adọkpụpụta ma ndị ikom ma ndị inyom, ọ na-enyefekwa ha ka a tụba ha n’ụlọ mkpọrọ.+ 4 Otú ọ dị, ndị ahụ a chụsasịrị gazuru ala ahụ na-ezisa ozi ọma banyere okwu Chineke.+ 5 Filip, n’onwe ya, gbadara obodo Sameria+ ma malite ikwusara ha Kraịst. 6 Ìgwè mmadụ ahụ ji otu obi na-aṅa ntị n’ihe ndị Filip na-ekwu. Ha nọ na-ege ntị ma na-ekiri ihe ịrịba ama ndị ọ na-eme. 7 N’ihi na e nwere ọtụtụ ndị nwere mmụọ na-adịghị ọcha,+ mmụọ ndị a na-etikwa mkpu n’oké olu wee pụta. A gwọkwara ọtụtụ ndị ahụ́ ha kpọnwụrụ akpọnwụ+ na ndị ngwọrọ. 8 Oké ọṅụ wee dị n’obodo ahụ.+ 9 Ma n’obodo ahụ, e nwere otu nwoke aha ya bụ Saịmọn, bụ́ onye nọ na-eme anwansi+ tupu oge a, na-emekwa ihe na-eju obodo Sameria anya, na-ekwu na ya onwe ya bụ nnukwu mmadụ.+ 10 Ha niile, malite n’onye kasị nta ruo n’onye kasị ukwuu, na-aṅa ya ntị ma na-ekwu, sị: “Nwoke a bụ Ike Chineke, nke a pụrụ ịkpọ Ike Ukwu.” 11 N’ihi ya, ha na-aṅa ya ntị n’ihi na o ji ike anwansi ya mee ihe juru ha anya ruo oge dịtụ anya. 12 Ma mgbe ha kweere n’ihe Filip kwuru, bụ́ onye nọ na-ezisa ozi ọma alaeze Chineke+ na banyere aha Jizọs Kraịst, e mere ha baptizim, ma ndị ikom ma ndị inyom.+ 13 Saịmọn ghọkwara onye kwere ekwe, mgbe e mesịkwara ya baptizim, ya na Filip+ na-anọ mgbe niile; o jukwara ya anya mgbe ọ hụrụ ihe ịrịba ama na-emenụ na oké ọrụ dị ike ndị a na-arụ. 14 Mgbe ndịozi nọ na Jeruselem nụrụ na Sameria anabatawo okwu Chineke,+ ha zigaara ha Pita na Jọn; 15 ndị a gakwara ma kpeere ha ekpere ka ha nata mmụọ nsọ.+ 16 N’ihi na ọ ka-adakwasịghị onye ọ bụla n’ime ha, kama ọ bụ naanị na e mewo ha baptizim n’aha Onyenwe anyị Jizọs.+ 17 Mgbe ahụ, ha bikwasịrị ha aka n’isi,+ ha wee malite ịnata mmụọ nsọ. 18 Ma mgbe Saịmọn hụrụ na a na-enye mmụọ nsọ mgbe ndịozi ahụ bikwasịrị mmadụ aka n’isi, o nyere ha ego,+ 19 sị: “Nyekwanụ mụ onwe m ikike a, ka onye ọ bụla m ga-ebikwasị aka m n’isi wee nata mmụọ nsọ.” 20 Ma Pita sịrị ya: “Ka gị na ọlaọcha gị laa n’iyi, n’ihi na i chere na ị pụrụ iji ego nweta onyinye nke Chineke na-enye n’efu.+ 21 I nweghị òkè ma ọ bụ ihe nketa n’ihe a, n’ihi na obi gị akwụghị ọtọ n’anya Chineke.+ 22 Ya mere, chegharịa n’ihe ọjọọ a ị na-eme, rịọsiekwa Jehova arịrịọ ike,+ ka e wee gbaghara gị ihe ọjọọ obi gị na-echepụta, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume; 23 n’ihi na ahụrụ m na ị bụ akpa ilu nke na-egbu mmadụ,+ bụrụkwa agbụ ajọ omume.”+ 24 Saịmọn zara, sị: “Rịọsierenụ+ m Jehova arịrịọ ike ka nke ọ bụla n’ime ihe unu kwuru wee ghara ịbịakwasị m.” 25 Ya mere, mgbe ha gbasịrị àmà nke ọma ma kwuo okwu Jehova, ha gaghachiri Jeruselem, ha wee na-ezisara ọtụtụ obodo nta nke ndị Sameria ozi ọma.+ 26 Otú ọ dị, mmụọ ozi Jehova+ sịrị Filip: “Bilie gaa n’ebe ndịda n’okporo ụzọ nke si Jeruselem gaa Geza.” (Ọ bụ ụzọ dị n’ọzara.) 27 Ya mere, o biliri gaa, ma, lee! otu ọnaozi+ Itiopia,+ nke nwere ike dị ukwuu n’okpuru Kandesi bụ́ eze nwaanyị ndị Itiopia, onye na-elekọta akụ̀ ya niile. Ọ gara Jeruselem ife Chineke,+ 28 ma ọ nọ na-alọta, nọrọkwa n’ụgbọ ịnyịnya ya ma na-agụpụta akwụkwọ Aịzaya onye amụma.+ 29 Mmụọ nsọ wee sị+ Filip: “Garuo nso n’ụgbọ ịnyịnya a.” 30 Filip wee gbara ọsọ gaa n’akụkụ ya ma nụ ka ọ na-agụpụta akwụkwọ Aịzaya onye amụma, o wee sị: “Ị̀ maara n’ezie ihe ị na-agụ?” 31 O wee sị: “N’ezie, olee otú m ga-esi mara, ma ọ bụrụ na mmadụ eduzighị m?” O wee rịọsie Filip ike ka ọ rịgota ma soro ya nọdụ ala. 32 Ma akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke ọ na-agụpụta bụ nke a: “Dị ka atụrụ, a kpụtara ya n’ebe a ga-egbu ya, dịkwa ka nwa atụrụ na-adịghị ekwu okwu n’ihu onye na-akpacha ya ajị, otú ahụ ka ọ na-adịghị emepe ọnụ ya.+ 33 N’oge e wedara ya ala, e wepụrụ ezi ikpe n’ebe ọ nọ.+ Ònye ga-akọ n’ụzọ zuru ezu banyere ọgbọ ya? N’ihi na e wepụwo ndụ ya n’ụwa.”+ 34 Ọnaozi ahụ sịrị Filip: “Ana m arịọ gị, Ọ̀ bụ onye ka onye amụma a na-ekwu ihe a banyere ya? Ọ̀ bụ banyere onwe ya ka ọ̀ bụ banyere onye ọzọ?” 35 Filip meghere ọnụ ya,+ malite n’akụkụ Akwụkwọ Nsọ a,+ o zisaara ya ozi ọma banyere Jizọs. 36 Ma ka ha nọ na-aga n’okporo ụzọ ahụ, ha bịarutere n’otu mmiri, ọnaozi ahụ wee sị: “Lee! Mmiri; gịnị na-egbochi ime m baptizim?”+ 37 *—— 38 Ya mere, o nyere iwu ka ụgbọ ịnyịnya ahụ kwụsị, ha abụọ banyekwara n’ime mmiri ahụ, ma Filip ma ọnaozi ahụ; o wee mee ya baptizim. 39 Mgbe ha si na mmiri ahụ pụta, mmụọ Jehova duuru Filip pụọ ngwa ngwa,+ ọnaozi ahụ ahụghịkwa ya ọzọ, n’ihi na ọ nọgidere na-agara onwe ya na-aṅụrị ọṅụ. 40 Ma a hụrụ na Filip nọ n’Ashdọd, ọ gazukwara ókèala ahụ ma nọgide na-ezisara+ obodo niile ozi ọma ruo mgbe ọ garuru Sesaria.+
Lee ihe e dere n’ala ala peeji na Mt 17:21.
Ọrụ Ndịozi 8